Dr. Garweyne ?Kiis cusub oo dabaysha ah ayaa lagu arkay Boosaaso Talaalkuna waa scoda?(Dhegeyso) – Radio Daljir
Dr. Garweyne ?Kiis cusub oo dabaysha ah ayaa lagu arkay Boosaaso Talaalkuna waa scoda?(Dhegeyso)
Agoosto 31, 2013 3:16 b 0
Garoowe, August 31, 2013 – Kiisas hor leh oo ka mid ah xanuunka dabaysha ayaa lagu arkay deeganada Puntland, xili ay si dar-dar leh ay u socdaan howlaha talaalka dabaysha ee caruurta la siiyo.
Agaasimaha daryeelka caafimaadka ee wasaarada caafimaadka ee Puntland Dr. Cabdirisaaq Abshir Xirsi (Garweyne) oo la hadlay Radio Daljir ayaa sheegay in la helay kiis dabayl ah oo Boosaaso ka dilaacay, kadib baaris la sameeyey.
Dr. Garweyne wuxuu sheegay in Kiiskaasi oo markii hore laga shakiyey, kadib? lagu xaqiijiyey baaris lagu sameeyey magaalada Nairobi ee xaruunta dalka Kenya, wuxuu kaloo xaqiijiyey in uu jiro Kiis kale oo lagu arkay degmada ?Boocame gobolka Sool balse baaristiisa aan weli la xaqiijin.
Wasaarada caafimaadka ee Puntland waxay sheegtay in ay si dar-dar leh u socdaan howlaha talaalka dabaysha ah, wuxuu ku tilmaamay dhibcanaha talalka hubka keli ah ee looga hortegi karo xanuunka, waxaana haatan lagu kordhiyey in ay xataa dadka waa weyn qaadaan karaan wejiga Lixaad ee talaalka.
DHEGEYSO: Dr. Cabdirisaaq Garweyne oo la hadlay Idaacada Radio Daljir
Dowladda Kenya oo shaacisay in unugyo ka tirsan Al-shabaab ay joogaan Nairobi iyo Mombasa
Isimada Baay oo kalsoonidii kala noqday dowladda iyo banaan-baxyo maanta ka socda Baydbabo